Izinzwa ezikude-6 ekhethekileyo. Ushicilelo lweTwinGeo -Geofumadas
Ikhaya/Ezahlukeneyo/Izinzwa ezikude-6 ekhethekileyo. Ushicilelo lweTwinGeo
Uhlelo lwesithandathu lweTwingeo Magazine lulapha, kunye nomxholo ophambili "IiSensors ezikude: uqeqesho olufuna ukuzibeka kwimodeli yenyani yasezidolophini neyasemaphandleni". Ukuveza usetyenziso lwedatha efunyenwe ngenzwa ezikude, kunye nawo onke amanyathelo, izixhobo okanye iindaba ezinxulumene ngqo nokubanjwa, ukuthunyelwa kwangaphambili kunye neposi yolwazi lomhlaba. Kule minyaka idlulileyo, ukusetyenziswa kweenzwa ekufumaneni ulwazi kuye kwanda ngokukhawuleza, kusinceda ukuba sibone ubunyani kwenye indlela.
Ngaphandle kokwazi ukuba kukho iitekhnoloji ezijolise ekuqwalaseleni umhlaba, kukuqonda ukubaluleka kokuzisebenzisa ukuqonda okungcono kunye nophuhliso lwendalo. Ukuphehlelelwa kweesathelayithi ezintsha ezinje ngeSAOCOM 1B Synthetic Aperture Radar (SAR), eyenzelwe ukuhlalutya, ukubeka iliso kunye nokuphuhlisa icandelo elinemveliso, kunye nokulawulwa kwazo zonke iintlobo zongxamiseko lokusingqongileyo, kusenza sikholelwe kumandla e-geospatial idatha.
IArgentina iqhubela phambili ngokuxhuma kunye nemida yetekhnoloji yasemajukujukwini, ngokweengxelo zeCONAE, le mishini yayintsonkothe ​​kakhulu kwaye imele umceli mngeni owabanika ezona ndawo zibalulekileyo ziiArhente zaseMhlabeni.
Olu hlelo, njengamaxesha onke, luye lwazibandakanya neenzame ezininzi zokuluqhuba, ngakumbi ngenxa yexesha elilinganiselweyo lodliwanondlebe. Nangona kunjalo, udliwanondlebe, olwenziwe nguLaura García -Geographer kunye neGeomatics Specialist, belugxile kwiinkampani ezifuna ukubonisa umhlaba izixhobo kunye nezibonelelo zokubandakanywa kwedatha yokuziva kude xa kuthathwa izigqibo.
Milena Orlandini, uMququzeleli we ILebhu yeTinkerersFab, kwaqaqanjiswa ukuba iinjongo zenkampani zisekwe "ekutshintsheni indlela idatha yendawo esetyenziswa ngayo, ibonwa kwaye icazululwe, ukuyidibanisa neetekhnoloji eziphazamisayo ezinje nge-GNSS, i-AI, i-IoT, umbono weKhompyuter, ukungqinwa okwenyaniweyo kwenyani kunye neHolograms". Ukuqala kwethu ukunxibelelana neLebhu yeTinkerers kwakuseBB Construmat, eyayibanjelwe e-Spain eSpain, yayinomdla ngendlela emangalisayo ukuba bayenza njani imbono yokwakha imodeli yedijithali yomphezulu woMhlaba kwaye bayidibanisa nedatha yesenzwa kude. bonisa amandla endawo.
"Ukutsha kwedijithali kwezentlalo kukwi-DNA yeeTinkers, asiliqela elithandayo kuphela inzululwazi, itekhnoloji kunye noshishino, kodwa malunga nokusasazwa"
Kwimeko IMARA, sithethe nomsunguli wayo u-Elise Van Tilborg, osixelele ngesiqalo se-IMARA.EARTH, nangendlela abaphumelele ngayo uMceli mngeni weplanethi eCopernicus Masters 2020. Esi siqalo saseDatshi senzelwe ukwenza uhlalutyo lwefuthe lokusingqongileyo olwenziwe kwiinjongo zoPhuhliso oluZinzileyo. .
“Lonke ulwazi lubekwe ngokwendawo kwaye luqhagamshelwe kwidatha yezivamvo ekude. Le ndibaniselwano ibangele ukuba kubekho inkqubo yokubeka iliso etyebileyo nexineneyo kunye novavanyo. ”
Ndikunye noMlawuli Jikelele kaEdgar Díaz U-Esri Venezuela, imibuzo yayijolise ekusetyenzisweni kwezisombululo zabo. Ekuqaleni kobhubhane, izixhobo ze-Esri zazisa izibonelelo ezinkulu eluntwini, nakubo bonke abahlalutyi abafuna ukwenza i-geolocate into eyenzekayo emhlabeni. Kwangokunjalo, uDíaz uphawule ukuba ngokwembono yakhe iya kuba yi-geotechnologies ebalulekileyo yokuphumeza inguqu yedijithali ezixekweni.
“Ndiqinisekile ukuba idatha yexesha elizayo iya kuvuleka kwaye ifikeleleke ngokulula. Oku kuya kunceda ekutyebiseni idatha, ukuhlaziya kunye nentsebenziswano phakathi kwabantu. Ubukrelekrele bokwenziwa buza kunceda kakhulu ukwenza lula ezi nkqubo, ikamva ledatha yendawo liya kuba nomtsalane kakhulu ngaphandle kwamathandabuzo”.
Njengesiqhelo, sizisa Izaziso enxulumene nezixhobo zokubona kude:
I-AUTODESK igqibezela ukufunyanwa kweSpacemaker
Ukuphehlelelwa ngempumelelo kwe-SAOCOM 1B
Ukubekwa kweTopcon kunye neMephu yeSixence zidibanisa ukwenza imisebenzi e-Afrika
Imozulu yaseCopernicus yeBulletin: Amaqondo obushushu ehlabathi
Ii-USGS Icwangciswe kwangaphambili ekuqwalaselweni komhlaba kunye nokuQokelelwa kweLandsat 2 Dataset
U-Esri ufumana uZibumi ukuphucula ukubonwa kwe-3D
Ukongeza, sinika uphononongo olufutshane malunga ne-Unfolded Studio yeqonga elitsha lolawulo lwedatha eliqulunqwe ngu-Sina Kashuk, Ib Green, Shan He no-Isaac Brodsky iqela elalisebenzela u-Uber ngaphambili, kwaye bagqiba kwelokuba benze eli qonga ukusombulula iingxaki zokuqhubekeka, ukuhlalutya, ukukhohlisa kunye nokuhanjiswa kwedatha ahlala enayo umhlalutyi we-geospatial.
Abasunguli be-Unfolded baye baphuhlisa itekhnoloji ye-geospatial ngaphezulu kwesiqingatha seminyaka kwaye ngoku bajoyine imikhosi yokuvuselela uhlalutyo lwe-geospatial.
Icandelo "Amabali oShishino" longezwa kolu hlelo, apho ophambili yayinguJavier Gabás osuka Yenyani.com. UGeofumadas wayenonxibelelwano lokuqala neGeopois.com, kudliwanondlebe oluncinci apho iinjongo kunye nezicwangciso zeli qonga zaye zachithwa, ezikhula ngakumbi nangakumbi mihla le.
UJavier, ovela kwicandelo lezorhwebo, usixelela ukuba luqale njani uluvo lweGeopois.com, yintoni ebakhokeleyo ukuba baqhubeke neli phulo, iimeko okanye ubunzima obuvele kunye neempawu ezibenze baphumelela kuluntu olukhulu kangako.
Akukho nto ishiyekileyo ngaphandle kokumema ukuba ufunde olu hlelo lutsha, esilungiselele lona ngemvakalelo enkulu nothando, sigxininisa ukuba iTwingeo inakho ukufumana amanqaku anxulumene neGeoengineering kuhlelo lwakho olulandelayo, nxibelelana nathi ngomhleli imeyile @ geofumadas.com kunye editor@geoingenieria.com.
Siyagxininisa ukuba okwangoku iphephancwadi lipapashwe kwifomathi yedijithali-jonga aphaYintoni oyilindileyo yokukhuphela iTwingeo? Silandele LinkedIn uhlaziyo oluninzi.